गगन थापाको सुझावः बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुस् |
गगन थापाको सुझावः बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुस्
On: २०७६ भाद्र १८ गते, बुधबार, ०२:३७ बजे प्रकाशित
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्राम लिन सुझाव दिएका छन्।
बुधबार संसदको विशेष समयमा सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा विदेश जानुपर्ने र सरकार सञ्चालनमा सक्रिय हुन नसकेकाले अब विश्राम दिनुपर्ने बताएका हुन्।
संसदमा सत्तारुढ नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएकाले त्यही पार्टी्भित्रबाट अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीलाई विश्राम दिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न चाहने, भइसकेका नेताहरु एक से एक हुनुहुन्छ। अस्वस्थ्य शरीरिक अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ज्यूलाई शासन सञ्चालनमा सहभागी गराइनु मानवीय हिसाबले पनि उचित होइन। उहाँलाई विश्राम लिन सुझाव दिऔं।’
उनले ओलीलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्ने नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो बालाई जस्तै आराम गर्नुहोस् भन्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘ बा किन विश्राम लिन चाहनु हुन्न? बा विश्राम लिनुहोस् भन्न किन सक्नुभएको छैन। यो गल्ती हामीले पनि गर्याैँ अब नदोर्होयाउ।’
सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी पाउनु संसदको अधिकार हो? उहाँको स्वास्थ्यबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जानकारीबाहेक औपचारिक रुपमा कुनै सूचना दिइएको छैन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य संसदबारे संसदले जानकारी पाउनु पर्दैन?’
जवाफमा नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई आफ्नो दलको अस्तित्व जोगाउने रणनीतिका रुपमा नलिन आग्रह गरे। ‘यो सरकार पाँच वर्ष चल्छ अर्को चुनावमा गाह्रो पर्छ भन्ने सोच देखियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा आफ्नो दलको सफलता नखोजौँ, पाठकले भने।
पाठकको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा पनि नझस्किन सुझाव दिए।
२०७६ भाद्र १८ गते, बुधबार, ०२:३७ बजे प्रकाशित